Download na akwụkwọ ahụ aja nke Samsung Galaxy A7 ọhụrụ | Gam akporosis
Budata akwụkwọ ahụ aja nke Samsung Galaxy A7 ọhụrụ
Fewbọchị ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ Korea nyere iwu na ntinye aka ya na igwefoto igwefoto 3, ọ bụ ezie na ọ gaghị abụ naanị ya na nke a, ebe m gwara gị n'isiokwu m gara aga, Samsung na-akwadebe Galaxy A9, ụlọ ọrụ mbụ nke ụlọ ọrụ nwere sistemụ igwefoto 4.
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị nwere n'aka anyị ọhụrụ na akwụkwọ ahụ aja nke sitere n'aka Samsung Galaxy A7. Dị ka ọtụtụ ndị nrụpụta, ọ bụ ezie na ọkachasị Samsung iji gosipụta ogo nke ihu ya, ihe onyonyo a na-ewetara anyị ọtụtụ agba na-egosi ụdị adịghị mma. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnụ ụtọ onyonyo ndị a n’elu ọnụ gị, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị otu esi ebudata ha.
Guysmụ okorobịa si Sammobile, tinye anyị n'aka anyị na weebụsaịtị, 8s HD 3D na akwụkwọ ahụ aja nke na-abịa site na aka nke ọnụ ọhụrụ ahụ sitere na ụlọ ọrụ Korea. Iji mee ka ọ dịkwuoro gị mfe ibudata ya na ekwentị gị, mbadamba nkume ma ọ bụ kọmputa, mgbe ahụ anyị ga-ahapụrụ gị ebe ị ga - ahụ ha niile. Ihe onyonyo niile dị na mkpebi mbụ ha, 2.200 × 2.200, yabụ, anyị nwere ike ịhazigharị ha na ọdụ anyị na enweghị nsogbu ọ bụla, n'agbanyeghị mkpebi ya
Ihe ohuru Samsung Galaxy A7 bu uzo mbu nke Samsung iji merie igwe ahia n’igwe 3 ese foto. Ihuenyo nke ọnụ a ruru 6 sentimita asatọ ma nwee mkpebi HD zuru oke na teknụzụ Super AMOLED. N'ime, anyị na-ahụ, dịka nsụgharị abụọ nke 4/6 GB nke Ram na 64/128 GB nke nchekwa dị n'ime. Batrị ahụ ruru 3000 mAh ma Android Oreo na-achịkwa ya, isi ihe na-adịghị mma, ọ gwụla ma Samsung na-ezube imelite ọnụ a ngwa ngwa o kwere mee, ihe na-ahụ akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ Korea na nke a, ọ yighị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Budata akwụkwọ ahụ aja nke Samsung Galaxy A7 ọhụrụ
Egosiputara Oppo A7 Njirimara zuru ezu: 6.2 "Ngosipụta HD +, SD450 na More